Oromo Parliamentarians Council: No Menelik, No Teddy Afro, No Bedele Beer in Oromia | Fighting for Freedom and Equality
Fighting for Freedom and Equality
Oromo Parliamentarians Council: No Menelik, No Teddy Afro, No Bedele Beer in Oromia
Posted by Gishe Abdi Wako on December 26, 2013
Muddee/December 24, 2013 · Gadaa.com
Habashan yaakaa kaleessa hojeetef dhiifma jeechuu manna ama ilee akka kaleessa insiin bituuf deeman jeedha jiru. Oromoon tokko ta’ii, dhaabbilee Oromoo tokko ta’aa. Habasha wagga 130 ol nu qalaa jira. Tewodros, Yohanis, Menelik Haile Silasen Oromoo fayya isaan gubaan, Harka Mirga fi Mila bitaa irra muran, Ijoolee Oromoo hunda qaban biyya alati gurguran, dubartii Oromoo ulfa qalan garatii bassan, Qabeenya Oromoo hunda samaan, Oromoo garbonfatan umurii gutuu mana issan keessa hojeechiftan, lafa Oromoo hunda fudhatan, Seenaaf addaa Oromoo hunda baleessan, Siirni Gadaa akka lamfa hin kaneeti baleessan, Umataa Oromoo walaka ol fixaan, Oromoo akka wal hin horee qama salaa Oromoo hunda isaan muran, Waani isaa Oromoo hin goodhin hin jiru.
Bara 2013 kana keessa amoo Habashoon ijoole Menelik fi Haile Silase biyya ala jirtu Ginbot 7, EPRP, Moresh, ETC, Arbanyoch, UDJ, kkf wal gurmessan Oromoo Irrati dula jiru. Wagga kana gutuu isaa Oromoo irrati Lola labsan. Ijoolen Oromoo wayee Oromoo akka hin bareesine goocha jiru, Tefaye G/Ab wayee Oromoo Bareesu isaan Dolara 40, 000 kasaruu goodhan bareefama isaa jijiran wayee Oromoo keessa bassan Website irrati gadii dhisan, kana Malee Tesfaye G/Ab ajeesuuf Mediati ba’aan saganta ajeecha iirati murteessan. Jawar Mohammed ani Oromoo dha jeechun wal qabsisan Jawar Mohammed, Mohammed Ademo fi Abdi Fite lubu baleesuuf saganteefatan. Qoophesitu Aljeezira dabalatee irrrati dulan. Jarsa Oromoo obboo Bulcha Demekssasa fara Uumataa Oromoo kan ta’ee Redio Gemeny Amharfaa irrati waaman xiiqeesuu egalan. Radeon Germany Afaan Amhara wagoota 40 darban hojii fara Oromoo dalaga kan ture dha.
Oromoon Mediya kamti bayee akka hin dubanee Paltak, Website; TV, Fi Redio Habasha hunda keessati Oromoo irra ugura ka’aan. Ugura isaan egalan kana Oromoon biyya jirtan utuu ilaalcha, amanta fi lagan wal hin qoodiin Habasha hunda irra akka ugura waan hunda irra keessan isiin gafana. Dhaabbilee Oromoo ABO, WFDOn, OPDOn, OBKn hundi Habasha Oromoo irrati dula bane kana of irra qabuuf tokko tanee garagaruma keenya dhiifne akka nama tokko tanee diina lafa keenya irrati nuti duluu of irra qabuu qabna. Kanafuu Oromoo isaan Baleefachuu, Mormachuu fi of irra Ari’uu qabna.
Gummin Paarlamaa Oromoo goochaa Habashoota balalefachuu qoofa utuu hin tanee deebi siirna qabsaa keenuuf, Oromoo hunda Sochosuuf qoophidha. Habashan utuu goochaa kanafi dhiifama Uumtaa Oromoo hin gafatiin lafa Oromoo keessa Mili ishee akka hin seene goochuuf murteefane jira.
Dulla Habashoon un irrati dulla kana ilaalcheese Gumiin Paarlamaa Oromoo baleefachuu qoofa utuu hin tanee waan goochuu qabnuu akkeekuuf media Oromoo hundan waliin dubachuuf qoophidha. Qoophin keenya kun amoo tokko Habasha abaruuf ykn Atakaroo ykn gorsuuf miti. Gummin Paarlamaa Oromoo Habasha waliin yoomi ile Hariroo hin qabu, hin feedhus, Habasha hin amanuu, Ogantun Walloo Warqitun Mana hidhatii kan gaddi dhisiftee Meneleik biyya erga gayee booda dura Oromoo dhigga dhangalasuu egalee. Hailu Shawul fi Andargachew Tsige ilee ama iyuu wayee Menelik Marrii kamtu akka hin dhiyeesine dhadhacha jiru. Dhimma kana Iaalchisun Oromoon waan goochuu qabu hunda qoophisen jira. Hundi dubatamuu yoo bate iyuu. Habashan yakka Oromo irrati gegesanf dhiifm nu goodha bara durii Menelik baleesee jira, kana booda dhifma isiin gafanee waliin hajiranu jeechu manati. Menelik bagga Oromoo fixee wara jeedhun waliin dubachun Dhagga Guurchaati Finca’uu dha, Kaanfuu Ejjeenoon keenya goocha jara kana Oromoof ibsu dha fi waan Oromoon goochuu qabuu akkeekuu qoofa. .
Gummi Paarlamaa Oromoo – December 21, 2013
← Minilik II Bofa Guurraacha
Letter of Appeal to President Obama – Re: the Human Rights Situation in Ethiopia →
‘Freedom!’: the mysterious movement that brought Ethiopia to a standstill
Uummati Mormii Kan Dhageessisuuf Mirgi Isaa Waan Hin Eegamneefi: Hermaan Koohin
Ethiopia’s OFC slams state of emergency, advocates peaceful struggle
Protest, repress, reform, repeatWith nobody in charge, Ethiopia declares a state of emergency
Europe speaks against martial law in Ethiopia
Jaramaya siyaasa Oromo rakkoo umata isaa dursuuf qaba.
Jechoota Gamnaa A. Seensa